Author: JoJosar Kesar
Koroomosoomyada waxaa ku dul tixan hiddo-sideyaal ah kuwa iyagu xaddida astaamaha ruux kasta oo inaga mid ah u gaar ah ee lagu garto.
Tan 28ka maalmood 9 illaa 17, tan 29ka 10 illaa 18, tan 30ka maalmoodna waxaa suuragal ah inay uur qaaddo inta u dhexeysa maalinta 11aad iyo maalinta 19aad laga soo billaabo maalintii ay ka timid caadadii ay ka qubaysatay. Ninka haddaba doonaya inuu guri barwaaqo dego, waxa la gudboon inuu waanooyinka soddonka ah ee soo socda si fiican u dhuuxo, uga fekero, xisaabtana ku darsado.
Marka xiga waa inay isku daydaa in waxyaabaha aynu soo sheegi doonno ay dhaqan geliso, si ay ninkeeda rabitaankiisa u raalligeliso iyana raaxada ula wadaagto. Nabigu waxa uu dhalay afar gabdhood inuu gabdhihiisa gudayna sunnadiisa iyo siiradiisa midna laguma sheegin.
Asc dhaman aniga waxn rawa sual ka baxsan muwducan taso ah ninkeyga mar walbo waxu idhaha hawsha guriga ha qawanin aniga qawanayo ayu ileyahay marku huwsha guriga guda galana ma yaqano habku uqawan laha marka ila taliya ninkeyga siden ujojiya arintas walalaha musliminta ah.
Raadada Nala soo xiriir. Labadaan qaab 2 iyo 3 waxay aad ugu habboon yihiin kolka geedka ninku jilicsan yahay oo aanu si toos ah isu taagi karin.
Isbeddelka jawiga, ka guurista xeebta oo loo guuro magaalada bartamaheeda ama lidkeed, ka guurista ban ilaa buur ama tuulo ilaa magaalo, beddelista waqtiyada cuntada, ku qubaysashada biyo qabow, ciyaarista isboortiga, xanaaqa faraha badan, cabsida iyo wixi la mida. Waxay Diinteenna Islaamku qabtaa in waalidka loogu neynaaso magaca curadkiisa, oo loogu yeeru Abuu-Hebel Hebel-Aabbihii.
Halkii jeer ee ay galmo dhacdo, waxaa gudaha cambarka gala qiyaastii milyan oo xawo ah, ha yeeshee dhowr boqol oo razxada ayaa gaara ugxanta. Maacuunta, gidaarrada iyo daaqadaha jikada oo aan sidii loo baahnaa loo nadiifin, daaqadaha qolalka gaar ahaan qolka jiifka iyo kan carruurta oon la nadiifin, si maalinle ahna aan loo furin si hawadu isu beddesho nakhaskuna uga baxo, dharka carruurta oo inta la mayro, dabeeto meel lagu raseeyo iyadoon la kaawiyadeyn iwm.
Haddaba, ninku waa inuu isagu marka hore xawadiisa baaro oo hubiyo inuu sito xawo awood u leh inay wax faxasho. Guurkz oo labadiisa gacmood labada cajar ee xaaskiisa kasoo gelsha dhanka hoose dabeetana sare ugu soo qaada oo isku soo nabo, iyaduna raaxasa xoogaa isa soo qaaddo qoortiisa hab-siiso. Dumarka qaar doonaya inay seegaystaan ayaa waxa dhacda inay xubintooda taranka geliyaan waxyaabo yaab leh, iyaga oon ka fekerin dhibaatooyinka ay waxyaabahaasi u geeysan karaan.
Soojiidashada jinsiyeed waxaan ula jeedaa nadaafadda oo ay la socoto ilqabato, sida dadka qaar yiraahdaan heblaayo jinniyo ayay leedahay, labadaasi oo kulmaana uma oggolaadaan nolosha qoyska inay kala daadato. Macaantiisa waxa barbar socda daal badan oo gaar ahaan ninka ku yimaada, mana fududeeyo inay xawadu u gudubto ilma-galeenka, geedka oon cambarka wada geli karin awgeed, taasi oo markaasi keenta suurtagalnimadii ubad dhalista oo yaraata Kolka intuu ninku dhabarka u seexdo ay xaaskiisu ku dul fariisato.
Haddaba kolkuu Islaamku yimid, gudniinka raggu waxa uu kamid noqday caadooyinkii la ansixiyey, ha yeeshee culimada diintu ilaa iyo gurka la joogo, inkastoo dhammaan ku qanacsan yihiin in wixii Nabi Ibraahiim la faray ay annagana ina saaran yihiin, misana kuma aanay heshiin in gudniinku waajib yahay iyo inuu sunno yahay midnaba. Raaxada Guurka Baabka 4aad Waxaa qoray: Sida caadiga ah, kolka galmada hore ay dhex marto labada ruux ee isqaba, geedka ninku waa uu damaa, dabeetana waxa labada qof qabta wax aad lulo mooddo oo ah raaxqda iyo macaan isku dheehan.
Waxaa jirta in ciyaaraha isboortiga, iwm. Waxaan eajeynayaa inay taladani ku anfici doonto. Sidoo kale mar kasta oo guirka kaadshayso waa inay samaysaa layligaasi. Waxaba ugu siid daran aayadda ugu dambaysa oo qofka dhegaha xoolaha jeexjeexaya ku tilmaantay qof abuurka Alle beddelaya shaydaanna ka amar qaata.
Notify me of new comments via email. Muxuu ninkaygu iga rabaa? Ragga waxa raaxwda dardaarmayaa inay dumarkooda isu raaxad oo isu carfiyaan. U galmooshada hooyada uurka lihi wax dhibaata ah u geysan mayso gurka iyo uurjiifkeeda toona, waase hadday galmadaasi ku dhacdo jawi taxaddar iyo feejignaani ku dheehan yihiin, welibana la isticmaalo hababka galmo ee ku habboon.
To find out more, including how to control cookies, see here: Marxaladdani waxay ka billabataa dhammaadka guga toddobaad, waxanay ku dhammaataa dhammaadka guga afar iyo tobnaad.
Qolka jiifka keliya iyo labada qol ee jiif mid waliba waxa uu leeyahay samaantiisa iyo xumaantiisa, waxaana aynu isku deyeeynaa in aannu inta ugu muhiimsan ka sheegno sifooyinka qolalkaasi, innaga oo u deynayna kan u sharraxan guurku inuu dookhiisa ku doorto kuu rabo labadaasi nooc ee qolalka jiifka.
Dhiigga nifaasku marka uu bilawga yahay waxa uu leeyahay midab madow, muddo kedibna waxa uu noqdaa guduud, kedibna jaalle xigeen, sidaasi buuna midabkiisu isu sii beddelaa guurrka uu biyo oo kale ka noqdo, biyahaasi oo tilmaan u ah dhammaadka dhiiggii nifaaska, markaas oo intay haweeneydu qubaysato, dhar qurux badan lebbisato, isna carfiso, galmo iyo gadgaddoon u diyaar garowdo.
Haddaba kolka ay jiraan laba qol jiif waxa dhacaysa raaxwda mid kasta oo kamid ah labada isqabaa uu qolkiisa dib ugu gurto, dhowr maalmoodna halkaasi ku bacooloobo, isaga oo isku dhiibaya ciilka iyo cidlada.
Ninka oo xawo leh, ha yeeshee geedkiisu aanu galmo ka qaybgeli karin. Waxase jira waxyaabo kale oo ay ku kala duwan yihiin labadaasi nooc ee xawo:.
Bushimuhu intay kala qaadmaan bay marna rasxada qabtaan marna sii daayaan. Waxa la hubiyey in qaab kasta oo kordhiya macaanta xilliga galmadu uu sidoo kale kordhiyo suuragalnimada uur-qaadista. Waa inaan wax kasta oo khalada faraha looga qaadin, isla markaana waa inaan wax kasta oo gef ah oo ka dhaca lagu guirka.
Waa tan labaade, waxa laga yaabaa inay haweeneydu qubaysato markay afartan maalmood u dhammaadaan siday caadadu ahaan jirtayha yeeshee dhiiggii weli ka socdo, caadadiina aanay weli ka dhammaan.
Waxaa markaa kulmaya isagoon waxa uu tabanayo si bareer ah ugu sheegi karin iyo iyadoo aqoon-darri ka sokow isaga uun wilaayada saarata. Dhakhaatiirta kuwa raaxava aqoonta badani ma awoodi karayaan inay sii sheegaan maalinta iyo waqtiga ay haweeneyda uurka lihi ummuli doonto, arrinkaasi oo ilaa iyo hadda aanay jirin cid garanaysa aan ka ahayn Eebbihii ina abuuray.
Muruqa gumaarka oo laga qaybgeliyo galmadu, waxa uu shaqada cambarka ka dallacsiiyaa qaabbile raaaxada waxba qaban una dallacsiiyaa ka qaybgale isagu giurka maamula. Qofka seegaysanayaa ma rabo inuu qof kale rabitaankiisa kaga dhergo, balse isaga laftiisa ayaa iska dhergaya isku biyabbaxaya.
Fikir kaada ka dhiibo Cancel reply Enter your comment here Xubnaha taranka dumarku waxay u baahan yihiin in loo daryeelo si ka daran kana feejigan kuwa ragga sababta oo ah. Sheekh Maxamed Cabdi Umul. Ragga waaya aragga ah qaarkood waxay yiraahdaan dhunkashada luqunta hoosteeda ilaa dhanka bidixo waxay keentaa istiin aad u kulul.